Sucuudiga oo Sheekh Atam ku daray liiska argagixisada. | Arrimaha Bulshada
Home News Sucuudiga oo Sheekh Atam ku daray liiska argagixisada.
Sucuudiga oo Sheekh Atam ku daray liiska argagixisada.
Bulsha:- Boqortooyada Sucuudi Carabiya ayaa shaaca ka qaaday, in isbaheysigooda ee go’doomiyay Qatar ay xanibaad hor leh ku soo rogeen Ururo Islamai ah iyo Shaqsiyaad caan ah oo xiriir dhow la leh Qatar balse lagu eedeeyay argagixisinimo.
Ata moo dowladda isu soo dhiibay sanadii 2014-kii, ayaa loo duuliyay dalka Qatar halkaas oo uu ka helay magangalyo Siyaasadeed.